Ikhosi yeDijithali yamawele: Ifilosofi yenguqulelo yedijithali entsha-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi yeDijithali yamaNwele: Ifilosofi yenguqulelo entsha yedijithali
Inguqulelo nganye ibinabalandeli bayo abathi, xa besetyenziswa, baguqule imizi-mveliso eyahlukeneyo. I-PC yatshintsha indlela esiphatha ngayo amaxwebhu angokwenyama, i-CAD yathumela iibhodi zokudweba kwiindawo zokugcina iimpahla; i-imeyile yaba yindlela emiselweyo yonxibelelwano olusesikweni. Bonke baphela belandela imigangatho eyamkelekileyo yehlabathi, ubuncinci ngokwembono yomthengisi. Utshintsho kwinguqu yedijithali yangaphambili yongeze ixabiso kulwazi lwejografi kunye nolwealphanumeric, oluye lwanceda umntu ngamnye ukuqhuba ishishini lale mihla. Zonke ezi nguqu zazisekwe kuqhagamshelwano lwehlabathi; oko kukuthi, iprotocol "http" esisayisebenzisa namhlanje.
Akukho mntu unokuqinisekisa ubume bendawo entsha yedijithali; Iinkokheli zeshishini zicebisa ukuba indlela eqolileyo kunye nepragmatic iya kusinceda kakuhle. Kuya kubakho amathuba abo banombono kunye nomda wokuxhamla kolu hlaziyo. Oorhulumente, bahlala bejonge ukuphinda bakhethwe kwakhona, banokuthi benze ngeliso kwixesha elifutshane. Kodwa ekuhambeni kwexesha, kuyinto exakayo, abasebenzisi abaqhelekileyo, abanomdla kwiimfuno zabo, abaya kuba nelizwi lokugqibela.
I-Digital Twin -I-TCP / IP entsha?
Kuba siyayazi into eza kwenzeka, nokuba asiziboni iinguqu ezihamba kancinci, kufuneka silulungele utshintsho. Siyazi ukuba ukwenza ngononophelo kuya kuba yimfuneko kwabo babuqondayo ubuntununtunu bemarike enxityelelaniswe nehlabathi apho ixabiso elongeziweyo lingaveli kwizikhombisi zentengiso yesitokhwe kuphela kodwa nakwimpendulo yabathengi abanempembelelo ngokubhekisele kumgangatho weenkonzo. Umgangatho ngokuqinisekileyo uza kudlala indima ekuqinisekiseni ulungelelwaniso phakathi konikezelo loshishino lokuyila kunye neemfuno zabasebenzisi bokugqibela.
Le khosi ibonelela ngombono kumbono wombhali (uGolgi Alvarez) kwaye ibandakanya amacandelo avela kwiGeospatial World, Siemens, Bentley Systems, kunye noLawulo lweShishini njengeenkokeli ezimeleyo zendlela yamaDijithali.
Ifilosofi yamawele edijithali
Iindlela kunye nemiceli mngeni kubuchwephesha
Umbono wekamva kuguquko kwimizi-mveliso
Imibono evela kwiinkokheli zeshishini
Amawele aDijithali aMdlandla
I-Digital Twin-Ifilosofi yenguqu entsha yedijithali